कसरी फोटोशप, इलस्ट्रेटर, जिम्प र अनलाइनमा छवि भेक्टरमाइज गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
जब हामी पिक्सेलको साथ छविलाई व्यवहार गर्छौं, यसलाई परिमार्जन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। एक पटक हामीले यसको मूल आकार बौना गरेपछि, विस्तार गरेर पछाडि फर्कनु असम्भव हुन्छ। किनकि यो बिटम्यापले भरिएको छ र अपठनीय र प्रयोगको लागि अयोग्य भयो। त्यसकारण यी केहि केसहरूमा छवि भेक्टरिंग आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, त्यहाँ धेरै सूत्रहरू छन्। केहि धेरै साधारण र अरू थोरै जटिल छन्, जसमा तपाईं परिणामलाई आफ्नो रुचि अनुसार व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि इन्टरनेटमा हामी कसरी भेक्टर छविहरू खोज्न चाहन्छौं भने, धेरै पाठ्य सामग्रीहरू बाहिर आउन सक्छन् वा भिडियो ट्यूटोरियलहरू जुन यससँग सम्झौता गर्दछ, तर कुनै पनि तपाइँले सबै सम्भावित विकल्पहरू दिदैन। क्रेटिभोसमा हामी जान्दछौं कि प्रत्येक व्यक्तिको उपकरण र सम्भावना हुन्छ। यसैले हामी धेरै उदाहरणहरू र यसलाई कसरी दिने भन्ने बारे बिभिन्न उपकरणहरू दिन गइरहेका छौं। तपाइँ तिनीहरू मध्ये कुनै एक पहुँच गर्न को लागी।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ इलस्ट्रेटरको साथ छवि कसरी भेक्टरमाइज गर्ने? फोटोशप? वा, हुनसक्छ, तपाइँ यसलाई अनलाइन गर्न आवश्यक छ? हामी यसलाई यहाँ गर्ने विभिन्न तरिकाहरू बारे छलफल गर्नेछौं।
1 फोटोशपमा कसरी छवि भेक्टरमाइज गर्ने
2 एडोब इलस्ट्रेटरमा कसरी छवि भेक्टरमा ल्याउने
3 जिम्पमा कसरी चित्रहरूलाई वेक्टरराइज गर्ने
4 तस्विरलाई अनलाइन कसरी भेटाउने
5 Corel ड्रा मा चित्रहरु Vectorize
फोटोशपमा कसरी छवि भेक्टरमाइज गर्ने
हामी नयाँ चित्र छान्छौं जुन हामी भेक्टरमाइज गर्न चाहन्छौं। पहिले परिणामहरू पूर्वावलोकन गर्नाले, यो विचारको साथ यसले कसरी काम गर्छ भनेर तपाइँलाई जान्न यो अधिक सुविधाजनक हुनेछ। यसैले हामी लिने पहिलो चरण लेयर डुप्लिकेट हुनु हो। सक्कली छोड्न र प्रतिलिपिको साथ काम गर्न, यदि हामी पछाडि फर्कनु पर्छ भने। यो चरण तपाईका सबै प्रोजेक्टहरूको लागि सँधै प्रभावकारी हुन्छ।
एक कार्य तह सँधै नक्कल। यदि हामीले गल्ती गरेमा हामी सिधै आफ्नो काम नगुमाकन फर्कन सक्दछौं
फिल्टर> ब्लर> गौसियन ब्लरमा जानुहोस्। छविको क्वालिटीमा निर्भर गर्दै हामीले अलि बढी वा कम धमिलो पार्नु पर्छ, त्यसैले तपाईं जाँच गर्न पर्छ। यसलाई निम्न छवि जस्तो देखिने बनाउन कोसिस गर्नुहोस्। अझै, म छ पोइन्ट राख्छु। र यस बिन्दु छवि को दूरी वा नजिकको मा निर्भर गर्दछ, कम देखिने पोइन्ट्स विस्तार गर्न।
अर्को चरणमा र यस लेरमा पहिले नै धमिलो हुँदै, हामी छवि ब्लेडि mode मोडमा जान्छौं। यसमा हामी 'डिभाइड' राख्छौं।
अब हामी 'थ्रेसोल्ड' सुविधा सहित भर्न वा समायोजन तह सिर्जना गर्न जाँदैछौं। यसमा हामी छविको विवरणहरू हाइलाइट गर्न आवाज थप्नेछौं। फरक पर्दैन यदि हामी पृष्ठभूमिमा धेरै हल्ला दिन्छौं किनकि हामी यसलाई हटाउनेछौं। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि छविको विवरणहरू राम्रोसँग चिह्नित छन्। हामी निम्न सर्टकटहरूको साथ सिर्जना गरिएको चरणहरूको प्रतिलिपि बनाउँदछौं:
विन्डोज: Ctrl + Alt + Shift + E
म्याक ओएस: Cmd + Alt + Shift + E
हामी त्यसपछि चयन> रंगको दायरामा जान्छौं। पूर्वावलोकन छविमा हामीले क्लिक गर्नुपर्नेछ र यसले परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यहाँ हामीले एक सहिष्णुता सेट गर्छौं जुन प्राय: and र २० बीचमा हुन्छ। तर यो सहि बनाउन, छविमा प्रशस्त पिक्सेलहरू छन् भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्। हामी 'लगानी' गर्न विकल्प छनौट गर्नुहोस् र ठीक क्लिक गर्नुहोस्। यो कुनै पनि अन्य कन्फिगरेसन दिन बिना।
हामी हेर्नेछौं कि कसरी हाम्रो छवि चिन्ह लगाइएको छ। हामी लास्सो उपकरण छनौट गर्दछौं र छविमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् «कार्य मार्ग बनाउनुहोस्» २ पिक्सेल सहिष्णुता र भोला। यसलाई बचत गर्न हामी सम्पादनमा> अनुकूल आकार परिभाषितमा जान्छौं।
एडोब इलस्ट्रेटरमा कसरी छवि भेक्टरमा ल्याउने
यस अवस्थामा, इलस्ट्रेटर भेक्टर विशेषज्ञता प्रोग्राम हो। देखि, Photoshop विपरीत, यो सीधा तिनीहरूको साथ काम गर्दछ, पिक्सलको साथ होईन। त्यसैले यो वर्णन गर्न धेरै सजिलो हुनेछ।
फाइल> खुलामा इलस्ट्रेटरमा छवि घुसाउनुहोस्। जब तपाइँ इलस्ट्रेटरमा तपाइँको छवि सम्मिलित गर्नुहुन्छ, यो चयनित देखा पर्नेछ, यदि होईन भने, मात्र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। छनौट गरिएको छविको साथ, तपाईंले विन्डो मेनूमा जानुपर्नेछ र "छवि ट्रेसि" "विकल्प प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। अर्को, छवि ट्र्यासि tool उपकरण विन्डो देखा पर्नेछ, जहाँ तपाईं विकल्पहरूको श्रृंखला देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो स्वाद वा आवश्यकता अनुसार कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को, तपाई प्रिसेट सेटिंग्स मा जानु पर्छ, जहाँ तपाईंसँग आफ्नो छविको लागि भेक्टरकरण गुणको प्रकार चयन गर्न विकल्प छ। थ्रेसोल्डमा तपाईले गुणस्तरलाई बढी सहज तरीकामा समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै गरी, र color्ग मोडमा तपाई ग्रेस्केल वा B / W छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
यस अवसरमा, तपाईं प्रिसेट्स भित्र हाई-फाई फोटो चयन गर्न सक्नुहुन्छ, स्वचालित रूपमा कार्यको अवलोकन गर्दै जुन कार्यक्रम तपाईंको फोटोमा पूरा गर्न सुरू गर्दछ। यस प्रक्रियाले तपाईंको कम्प्युटरको क्षमता र छविको जटिलताको आधारमा केहि सेकेन्ड लिन सक्दछ।
तपाईंले इलस्ट्रेटर सफ्टवेयर द्वारा काम गरिसकेको छवि प्राप्त गर्नुहुनेछ र यसको गुणस्तरको लागि रंग पट्टीमा जानुहुन्छ। स्वाद गर्न कन्फिगर गर्नुहोस्, प्रत्येक छवि फरक हुन सक्छ। त्यसोभए तपाईंले प्रयास गर्नु पर्छ जबसम्म यो तपाईंको रूचिमा छैन। यो भाग छवि र व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ। त्यसो भए तपाईं 'वस्तु' मेनूमा जानुहुन्छ र 'विस्तार' चयन गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईंसँग तपाईंको रूपान्तरित छवि हुनेछ।
जिम्पमा कसरी चित्रहरूलाई वेक्टरराइज गर्ने
एउटा चित्रलाई भेक्टर गर्न एक तरिका प्राय: कलम उपकरणको साथ हुन्छ। यो आकार अधिक परिष्कृत छ र अधिक टाउको दुखाइ दिन्छ। कोही भन्छन कि यस तरीकाले यसो गर्नु र यसलाई चित्रमा रूपान्तरण गर्दा भेक्टरिizing हुँदैन। जो भेक्टराइजेसन को परिभाषा द्वारा सत्य हुन सक्छ। किनकि यसले छविलाई यसको गुणस्तर नगरीकन आकारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्दछ।
जिम्पमा हामी यो फारमको लागि प्रयोग गर्न सक्छौं 'छविलाई डिजिटलाइज' भनिन्छ।, तर कुनै पनि अवस्थामा, जब विस्तार वा छवि कम गर्ने बरकरार रहन्छ। यो अझै बिट छवि जस्तो देखिन्छ। यसको समाधान यो 'गौसियन ब्लर' उपकरणको साथ कम गर्न सकिन्छ pixelation एकदम कम गर्न। एकचोटि ध्यान केन्द्रित नगरी, हामी एक मध्यम 'थ्रेसोल्ड' लागू गर्दछौं। १२०/२120 अधिक वा कम र यो भेक्टोरइज्ड जस्तो हुनेछ।
यस तस्विरलाई सुधार्नको लागि, हामी निम्न अनलाइन भेक्टर उपकरणमा जान सक्दछौं। र तिनीहरूलाई कुनै पनि उपकरणमा प्रयोगको लागि .svg ढाँचामा बचत गर्नुहोस्।
तस्विरलाई अनलाइन कसरी भेटाउने
यो छविलाई भेक्टोरइज गर्ने सब भन्दा सजिलो तरीका हो। त्यहाँ धेरै पृष्ठहरू छन् जुन यसलाई समर्पित छ। तपाईंले भर्खर तीन सरल चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ। पहिले तपाईको कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरिएको छवि छनौट गर्नुहोस् र वेबमा अपलोड गर्नुहोस्। त्यहाँ सामान्यतया 'अपलोड' आइकन हुन्छ। यस तस्विरमा कहिलेकाँही सीमित स्पेस १MB वा २MB अधिकतम हुन्छ। (यसैले यो जहिपै उपयोगी स्रोत हुँदैन) तपाइँ भेक्टरकरण प्रक्रिया मार्क गर्नुहोस् र त्यसपछि एक .svg ढाँचा डाउनलोड गर्नुहोस्। यस तरिकाले तपाईं आफ्नो भेक्टर छवि प्राप्त गर्नुहुनेछ। योसँग कुनै विज्ञान छैन।
निम्न सूचीमा हामी तपाईंलाई यो ढाँचामा प्रयोग गर्नका लागि सब भन्दा सिफारिसहरू दिनेछौं।
यस वेबसाइटको कुनै अतिरिक्त कार्यहरू छैन। मैले परिचयमा भनेझैँ, तयार गर्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्। चलाख
यो एक सबै भन्दा पूर्ण र सबै भन्दा सिफारिस गरिएको हो। भेक्टरमैजिकसँग अधिक विकल्पहरू हुन्छन्, जस्तै विवरण र रंगहरूको गुणस्तर। परिणाम सम्पादन गर्नुहोस्, पृष्ठभूमि हटाउनुहोस् ... अन्य बीचमा।
फेरी हामीसँग एक उपकरण छ जसले हामीलाई बिटम्यापबाट भेक्टोरराइज छविमा जान अनुमति दिन्छ तर रंगहरूको आदर नगरी। छविहरू अनलाइन पहुँच गर्न सम्भव छ र स्थानीय मात्र होइन। अन्यथा हामी कुनै अधिक कार्य गर्न सक्षम हुने छैनौं: न रूपरेखा सम्पादन गर्नुहोस्, न रंगहरू, न पृष्ठभूमि वा केहि।
Corel ड्रा मा चित्रहरु Vectorize
कोरेल ड्र, इनलाइन भेक्टोरलाइजेशनको साथ, सायद सरल उपकरण हो। यदि हामीले छविलाई 'टरान्टिनो' को साथ अघि बनायौं भने र मूल बढायौं भने हामी पिक्सलेसन देख्नेछौं। अब हामी यसलाई हाम्रो कोरेल ड्रमा प्रस्तुत गर्नेछौं।
एकचोटि हामीसँग यो भएपछि, हामी 'बिटम्याप भेक्टोरइज' (बिटम्याप ट्रेस) जाँदैछौं; 'रूपरेखा ट्रेस' र 'विस्तृत लोगो' (विस्तृत लोगो)। बाँया छविमा मूल छवि देखा पर्नेछ र दायाँमा भेक्टर चित्रण हुनेछ। जहाँ हामी पिक्सेल हटाउने तरिका जाँच गर्न सक्छौं। थप छैन। अवश्य पनि, त्यहाँ छविमा निर्भर अधिक विस्तृत कन्फिगरेसनहरू छन्। विवरणहरू, स्मूइ ,्ग, कुनामा र रंग विवरणहरू। एकचोटि तपाईं विश्वस्त भएपछि, 'ठीक छ' मा क्लिक गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कसरी छवि भेक्टरमाइज गर्ने
एन्टोनियो गार्सिया रोड्रिग्ज भन्यो
ठीक छ, म मात्र एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, Fantastic, म फोटोशप र अटोकेडसँग काम गर्दछु, यस समयमा म छविहरू र भेक्टोरिलाइजेशनको दृष्टान्तमा थिएँ तर तपाईंको प्रकाशनको लागि धन्यवाद म लक्ष्यमा पुग्न सक्षम भएको छु।
एन्टोनियो गार्सिया रोड्रिगलाई जवाफ दिनुहोस्
टाइपोग्राफी, सामग्री श्रेणीक्रम, र typographic विरोधाभास
स्लोवाक प्रतियोगितामा भाग लिनुहोस् र १००० यूरो जित्नुहोस्